म्यानमारका सैनिक नेताहरूमाथि अमेरिकाले लगायो यस्तो कडा प्रतिबन्ध — Sanchar Kendra
१आज ७३६८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १४५ को मृत्यु
२लेस्टर सिटीले जित्यो एफए कप फुटबलको उपाधि, चेल्सी पराजित
३सकियो ओली-नेपालबिचको ‘वान टु’ वार्ता, के भयो सहमति ?
४कोरोनाबिरु’द्ध ल’ड्न सीसीएमसी बैठकले के गर्यो निर्णय
५यस्ताे छ इजरेल-प्यालेस्टाइनबीच तनाव भइरहनुकाे मुख्य कारण र १०० वर्ष पुरानो छ मुद्दा
६सिंहदरबारमा ओली र नेपालबीच ‘वान टु वान’ वार्ता सुरु, यी बिषयमा हुदैछ छलफल
७कहिलेदेखि सुरु हुदैछ नयाँ शैक्षिकसत्र ? शिक्षा मन्त्रालयले दियो यस्तो जानकारी
८बाबुराम भट्टराईको यस्तो खुलासाले ओली तनावमा
९निषेधाज्ञाका बेला काठमाडौंमा यस्ताे काण्ड मच्चाउने ५ जना पक्राउ, को हुन् उनीहरु ?
१०इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच यु’द्ध झनै चर्किएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाईडेन चाले यस्तो कदम
११चिनियाँ अनुदानको स्वास्थ्य सामग्री बोकेका गाडी तातोपानी नाकातर्फ प्रस्थान, के-के आउदैछ ?
१२काठमाडौंमा कहाँ-कहाँ लगाइँदैछ चिनियाँ खोपको दोस्रो डोज, हेर्नुहोस सूचीसहित
म्यानमारका सैनिक नेताहरूमाथि अमेरिकाले लगायो यस्तो कडा प्रतिबन्ध
काठमाडौँ । अमेरिकाले म्यानमारका सैनिक नेताहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले ‘कु’ गर्ने म्यान्मारका सैनिक नेताहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो कदम सैनिक नेताहरू, उनीहरूका परिवारका सदस्य र सेनासँग सम्बद्ध व्यापार-व्यवसायप्रति लक्षित रहेको बीबीसीले जनाएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनले सेनालाई आफ्नो कदम फिर्ता लिन र सू चीसिहत जननिर्वाचित नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै आएका छन्। पहिलो चरणमा प्रतिबन्धको निशानामा पर्नेहरूको पहिचान यसै साताभित्र गरिसक्ने पनि बाइडनले बताएका छन्।
अमेरिकामा रहेको एक अर्ब डलर बराबरको सरकारी कोषमा सेनाको पहुँच रोक्ने कदम पनि चाल्न लागिएको जनाइएको छ । ‘कु’ पछि म्यानमारमा सैनिक सत्ताविरुद्ध व्यापक प्रदर्शन भइरहेको छ । तर, प्रदर्शनकारीलाई सैनिकले दमन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले पानीको फोहरा, रबरको गोली तथा ताकेरै गोली प्रहार गरिरहेका छन् ।
मंगलबार गोली लागेर घाइते भएकी एक महिलाको राजधानी नेपिद्‌अस्थित एउटा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । म्यानमारमा गत साता सेनाले सत्ता कब्जा गरेयता त्यसको विरोधमा हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। नेत्री आङ सान सू चीको जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ताबाट च्युत गर्दै सेनाले एक वर्षका लागि सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ।